Kooxda Tifatiraha ee Recetin | Recipe
Recetin waa a bogga internetka ee ku saabsan cuntada karinta ee sida gaarka ah loogu talagalay carruurta. Dhibaato aad caadi u ah hooyooyinka badankood ayaa ah marka la diyaarinayo meeniska maalin kasta. Maxaan karsadaa maanta? Sideen sidaas ku sameeyaa carruurtaydu waxay cunaan khudradda? Sideen ku diyaarin karaa a cunto dheellitiran oo caafimaad leh carruurtayda? Si looga jawaabo su'aashaas iyo kuwa kale oo badan, Recetín wuu dhashay.
Dhammaan cuntooyinka ku yaal websaydhkeenna waxaa diyaariyey kuugga ku takhasusay nafaqada carruurta, sidaa darteed waalidiinta ayaa leh dhammaan dammaanadaha inaad u diyaariso jikada caafimaad iyo caafimaad leh. Haddii aad rabto inaad ka mid noqoto degelkan oo aad nala soo daabacdo cuntadaada, waa inaad kaliya buuxi foomka soo socda waana kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Ma rabtaa inaad ogaato kooxdayada cuntada kariya? Hagaag, halkan waxaan ku soo bandhigeynaa kuwa ka tirsan kooxda waqtigaan iyo kuwa horeyba noolashaqeeyay.
Waxaan haystaa shahaadada Xayeysiinta iyo Xiriirka Dadweynaha. Waxaan jeclahay inaan karsado, sawir qaado oo aan ku raaxeysto shanteyda yar. Bishii Diseembar 2011 aniga iyo qoyskeygu waxaan u guurnay Parma (Talyaaniga). Halkan weli waxaan ku sameeyaa suxuunta Isbaanishka laakiin sidoo kale waxaan ka sameeyaa cunnooyinka caadiga ah ee waddankan ka yimaada. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay suxuunta aan ku diyaariyo guriga, had iyo jeerna loogu talagalay ku raaxeysiga kuwa yaryar.
Waxaan ahay qof aamin san oo aan aamini karin jikada iyo gaar ahaan macmacaanka. Waxaan ku qaatay sannado badan qayb ka mid ah waqtigayga waxaan u huray diyaarinta, barashada iyo ku raaxeysiga cuntada badan. Anigu waxaan ahay hooyo leh laba carruur ah, macallin cunto karinta u ah carruurta waxaanan jecelahay sawir qaadista, sidaa darteed waxay ka dhigaysaa isku-dhafnaan aad u wanaagsan oo loo diyaariyo suxuunta ugu fiican ee Recipe.
Waan jeclahay karinta, takhasuskayguna waa macmacaan. Waxaan diyaarsadaa kuwa macaan, oo aysan carruurtu iska caabin karin. Ma rabtaa inaad ogaato cuntada sida loo sameeyo? Markaa xor u noqo inaad i raacdo.
Waxaan ku dhashay Asturias sanadku markuu ahaa 1976. Waxaan ahay xoogaa muwaadin aduunka ah waxaanan sitaa sawiradayda, xusuusyo iyo cuntooyinka halkan iyo halkaa shandadayda. Waxaan ka tirsanahay qoys ay daqiiqadaha wanaagsan, xun iyo kuwa xunba, ku kala wareegaan miiska, sidaa darteed tan iyo markii aan yaraa jikada ayaa noloshayda joogtay. Sababtaas awgeed, waxaan u diyaariyaa cuntada sida kuwa yaryar ay caafimaad ahaan ugu koraan.
Magacaygu waa Irene, waxaan ku dhashay Madrid waxaanan nasiib u yeeshay inaan noqdo hooyo cunug aan u jeclaado waalli oo jecel cunista, iskuday cuntooyin iyo dhadhan cusub. In ka badan 10 sano ayaan si firfircoon wax ugu qorayay baloogyo kala duwan oo gastronomic ah, kuwaas oo, shaki la'aan, Thermorecetas.com ay taagan tahay. Adduunyadan wax lagu qoro waxaan ka helay meel cajaa'ib leh oo ii oggolaatay inaan la kulmo dad waaweyn oo aan barto xad-dhaafka cuntooyinka iyo tabaha si aan uga dhigo cunugga cunnadiisa kan ugu fiican iyo labadeenaba inaan ku raaxeysano diyaarinta iyo cunista suxuunta macaan.